ရှေ့တော်၌ကဲ့သို့၎င်း, ယခုအားလုံးရောဂါများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တခြားအပျက်သဘောအပြောင်းအလဲများကိုနှင့်အတူအစဉ်အလာနှင့်ရိုးရာနှစ်ဦးစလုံးဆေးဝါးအားဖွငျ့တိုကျခိုကျဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ အလေးချိန်ဆုံးရှုံးများ၏ရိုးရာနည်းလမ်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အားကစားနှင့်ကာမျှတသောအစားအစာနှင့် Non-ရိုးရာအထူးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျကိုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိအဘယ်အရာကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို သိ. ကိုယ်အလေးချိန်, အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုဘို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုစေရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သက်ရောက်မှု၏နည်းလမ်းအားဖြင့်, သူတို့5အမျိုးအစားများကိုခွဲခြားထားပါသည်:
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုဖိနှိပ်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ရွှဲနှင့် ပတ်သက်. ဦးနှောက်တစ် signal ကိုပေးပို့ခြင်း, အစာခြေလမ်းကြောင်းအတွက်၎င်း၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သော်လည်း, အရမ်းနိမ့်ကယ်လိုရီပိုလျှံအဆီဖွဲ့စည်းမထားဘူး။ ဤရွေ့ကား flaxseed, ရေညှိများပါဝင်သည် ပီရူလိုင်းနား , marshmallow အမြစ်;
ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပိုလျှံအရည်ထွင်း။ Diuretics ဆီးအကျိုးသက်ရောက်မှုဝက်ဝံနား, burdock, ချ. cranberries, cranberries ရှိသည် ဖြစ်. ,
တစ်ဦး laxative အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဟင်းသီးဟင်းရွက်အူ peristalsis လှုံ့ဆော်နှင့်အတူတကွစွန့်ပစ်ထုတ်ကုန်နှငျ့အတူသူ့ကိုအဆိပ်ကနေထုတ်ယူသည်။ ဤရွေ့ကားပျိုးပင် senna နှင့် buckthorn, စမုန်နက်, anise မျိုးစေ့များ, ပျိုးပင်ငှက်ပျောတို့ပါဝင်သည်;
choleretic အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အစာခြေ, ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်ဇီဝြဖစ်၏သည်းခြေတိုးတက်လာသောလုပ်ငန်းစဉ်၏မစင်ကိုလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းကြောင့်။ ဤရွေ့ကား barberry, dandelion ထာဝရပါဝင်သည်;
သာ. ကြီးသောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမှပံ့ပိုး။ သူတို့ကပစ္စည်းများ၏လဲလှယ်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့ဇီဝတက်ကြွစွာဒြပ်စင်ဆံ့။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သော yerba အိမ်ထောင်ဖက်, အစိမ်းလက်ဖက်, Cayenne ငရုတ်ကောင်း, အဖြစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်နံ့သာမျိုးအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည် နနွင်း , ဂျင်း။
ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုဘို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ရေပန်းအစားဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများအနက်ကိုသင်အသီးအသီးအုပ်စုတစ်စုကနေတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုမဆံ့သောသူတို့ကိုရွေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တဦးတည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် marshmallow အမြစ်, burdock, စမုန်နက်, dandelion နှင့်အိမ်ထောင်ဖက်၏စုဆောင်းခြင်း။ လုပ်နိုင်သောဥပမာ, ကို "peppercorn" ၌အနည်းငယ်ဂျင်းသို့မဟုတ်ငရုတ်ကောင်းထည့်ပါ။ ပြင်ဆင်နေသည့်အခါဆေးဖက်ဝင်သောက်စုဆောင်းခြင်းတန်းတူအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများယူပြီးတစ်လက်ဖက်ရည်အဖြစ်ပြသနာတွေခံရနိုင်ပြီး, တစ်နာရီ၏လေးပုံတပုံများအတွက်ရေရေချိုးခြင်းနှင့်အနာစိမ်းထဲတွင်နေရာနိုင်ပါသည်။ တနေ့သုံးကြိမ်မုန့်ညက်မတိုင်မီဝက်ခွက်များကအဆီရှို့ကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုယူပါ။
သို့ရာတွင်ထိုသို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆီရှို့ကြောင့်အပင်များ, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်နှင့်လူတိုင်းအတွက်သင့်လျော်မဟုတ်နိုင်သည်ကိုစိတျထဲတှငျထမျးရပါမည်။ သငျသညျဂရုတစိုက်ကုန်ကြမ်းများနှင့် phytotherapeutist နှင့်အတူတိုင်ပင်ဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူသေတ္တာပေါ်ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်သင့်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင် Slim ကော်ဖီ
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Clenbuterol ယူနည်း
Cholestasis - လက္ခဏာများ
သားအိမ်ခေါင်းအပေါ် Endocervical cyst
ကျွန်မအလုပ်လုပ်ချင်ကြပါဘူး - ဘာလုပ်သနည်း
ခဲတံစကတ် - ဂန္မော်ဒယ်များနှင့်စံပြပုံရိပ်ကိုအသစ်စိတ်ကူးများ
က "ဆိုဗီယက်" စတိုင်ပါတီ
Hrenovuha - တစ်စပ် aftertaste နှင့်အတူချက်ပြုတ်နည်းများအရက်သောက်
စကားပြန် Dream - ပင်လယ်ကိုနှင့်မည်သို့ပင်လယ်ကိုအကြောင်းကိုအိပ်မက်အနက်ကိုဘော်ပြသနည်း
Filatov အပေါ် aloe
သံပုရာနှင့်လိမ္မော်ရောင်နှင့်အတူ zucchini ၏ယို
တကွတဲအမျိုးအစားများ - လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အဆင်ပြေ
ဟီလာရီကလင်တန် "ဘာဖြစ်သွား" ဟုအဆိုပါအတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်များ၏လွှတ်ပေးရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာ
Purslane - လွင်ပြင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု, အထူးသဖြင့်ကြီးထွားလာ